Monday June 03, 2019 - 08:56:02 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Mudnaanta ay leedahay in la helo Hogaan sax ah, waa mid aad u weyn, maxaa yeelay waxaa badan dadku in ay ku daydaan ama qaataan tilmaamaha hogaamiyahooda, (Dadku waxay qaataan dabeecadaha iyo Diinta uu haysto Hogaamiyahoodu). Rasuulkenii suubanaana wuxuu yiri SCW ( Labada Qaybood oo Bulshada ka mid ahi haday toosaan oo Wanaagsan yihiin, Bulshada oo dhan wey toostaa, labadaasina waa Culimada iyo Madaxda).
1-DIIN: hogaamiyaha dhabta ah e hogaaminaya umad islaama dabecada iyo astaanta kowaad e aynu ka rabnaa waa in u diin leyahay diinta islaamka ah Garanaayo Dabecadan wanaagsan Hadii laga waayo waxa kale e dabacado leayahay haba fiicnadaan o ha wnaagsanadan dhamaan waxay
noqonayaan ka kac.
8- Cilmi iyo Aqoon: uu kufahmo dhacdooyinka iyo geedi socodka Aduunyada, oo qof dhoohan oo Jaahil ahi naftiisaba ma hogaamin karo maadaama ay adagtahay inuu kala garto Khayrka iyo sharta, waxa qiimaha leh iyo waxa aan qiimaha lahayn. Labadaa Tilmaamoodna (Kartida iyo Cilmiga) Rabbi baa Qur´aanka ku sheegay dhawr jeer, isagoo ku yiri carabka gabadhii Nabi Shucayb markay ka had-laysay Tilmaamaha Nabi Muuse: إن خير من استأجرت القَويُ الأمين Nabi Yuusufna markuu ka codsanayay Boqorkii Fircoon ahaa inuu ka dhigo wasiirka Lacagta wuxuu
yiri waxaan ahay (Qof wax ilaalin kara, lehna Aqoon sare).
10- Latashi iyo talaqaadasho, oo qofka aan dadka la tashanini wuxuu noqonayaa kaligii taliye, taana waa lagu jabaa, waana mid aan waqtiga xaadirka ah ka dharagsanahay xumaanteeda iyo dhibka ay keento. Waxaa ka mid ahaa dhaqankii Rasuulkeenii suubana (scw) inuu ku oran jiray
Saxaabadiisa markasta oo ay ka hortimaado arin muhiima ahi (ashiiruu calayya ayuhanaas =
dadyahaw tala i siiya ama ilataliya). Qofkii dadka la tashadaa caqligooduu la wadaagaa, kala
faa’iidaystaa, wuxuuna ku abuuraa ixtiraam iyo qadarin, qofka dadka talada ka qaadana isagaa is
cariiriya, dadkana wuu duleeyaa wuxuuna dareensiiyaa liid iyo dulinimo.
11- wada shaqayn: Hogaamiyaha wangaasani waa in uu shaqaalihiisa dawlda si fiican ula
shqeeya oo waxa khaldan saxaa waxa walbana la falanqeeya si lo gaadho Guul IYO Gobonimo.